🥇 ▷ Marble Nest DLC ayaa loogu dhawaaqay Pathologic 2 ✅
Marble Nest DLC ayaa loogu dhawaaqay Pathologic 2
Pathologic 2 Waa dib u soo nooleynta ciyaartii asalka ahayd ee 2005 waxaana laga dooday May ee la soo dhaafay PC isla markaana waxaad sidoo kale ka heli kartaa Xbox One. Sanadkii 2017 ayay ku dhawaaqeen Buugga Marble, shaashadda la iibin karo ee cinwaanka iyo, haddii aadan fursad u helin inaad isku daydid, ka dib waa inaad ogaataa in nooc wanaajiyey uu dhowaan imaan doono bilaash.
Boggiisa tooska ah, soosaaraha Ruushka Ice-Pick Lodge ayaa taas ku dhawaaqay Pathologic: Marble Nest Waxaa laga heli doonaa Xbox One iyo PC dhamaadka sanadkaan. Haddii aad u maleyneyso inuu noqon doono nooca isku midka ah ee 2017, waad qaldantahay, maxaa yeelay markan horumaradu wuxuu hirgalin doonaa waxoogaa horumar ah oo laxiriira waxqabadka iyo tarjumaadda, intaa waxaa sii dheer sixitaanka khaladaadka iyo cusbooneysiinta interface-ka isticmaalaha.
Xaashida ogeysiiska waxaa lagu aqriyaa in DLC ay bilaash noqon doonto, laakiin bogga soosaaraha waxaa lagu tilmaamaa kuwa leh nooca PC-ga ama iibsadaan kahor bilaabista Buugga Marble Waxay ku ciyaari karaan iyadoon kharash dheeraad ah lahayn.
Hadaadan aqoon isaga, waanu taas kuu sheegnay Pathologic: Marble Nest Waa muuqaal ku dhawaad ​​2 saacadood ah waana nooc ka mid ah kala-baxa Pathologic 2. Tan gudaheeda waxaad ku maamuli doontaa Bachelor Dankovsky oo wuxuu cagaha kugu saari doonaa ka dib Dhimashada loo soo bandhigay in ay mar kale bilawdo ka dib markii uu ka badiyay labadiisa cudur ee daacuunka.
Qaybiyaha loo yaqaan’BruildGAMES ‘yari ayaa daaha ka qaaday xayeysiis xayeysiis ah, kaas oo aan hoos kaga tagno.
Imminka markii aad aragtay, noo sheeg, maxaad ka fikirtay? Miyaad ciyaartey shaxanka soo baxay 2017? Miyaad horay u ciyaartay Pathologic 2? Fikradaada kula wadaag faallooyinka.
Pathologic 2 waa ciyaar dib u soo nooleyneysa khibradii hore; si kastaba ha noqotee, waxay bedeshay magaceeda si ay uga hor istaagto adeegsadayaasha inay ku jahwareeraan nuqulkii HD ee la bilaabay 2015. Daahitaankiisa ayaa loo qeybin doonaa qaybo; kii ugu horreeyay, kaasoo sheegaya sheekada Haruspex, ayaa hadda la heli karaa, halka cutubyada The Bachelor iyo Changling ay imaan doonaan goor dambe.
Pathologic 2 Waa la heli karaa ilaa Maayo ee sanadkan, waxaad ka heli kartaa warar dheeraad ah oo ku saabsan ciyaartan haddii aad booqato boggan.